Sida Bitcoin loogu iibsado CNHC
CNHC (Digital currencies) xeeladaha bulshada
Sideen Bitcoin ugu iibsadaa CNHC ?
Sidee ayaan ugu dari karaa taladayda iyo xeeladahayga loogu tala galay CNHC ?
Q.Sideen Bitcoin ugu iibsadaa CNHC ?
Majiraan yaboohyo la helay si aad ugu iibsato Bitcoin CNHC. laakiin wali waxaad wali ku iibsan kartaa Bitcoin qaabab kale oo lacag bixin oo badan. Kaliya halkaan riix si aad u aragto qaabab kala duwan oo aad ku iibsan karto Bitcoin.